Nge kwiyadi njenge isihloko, egolide kuthatha ukuba entsimini izityalo phantsi isibhakabhaka esiluhlaza. Powered by NextGen oku emangazayo progressplay Slots umdlalo. Le slot ezintlanu emasondweni ekuvumela ukuba ukuwina 243 iindlela, zama nje lomhlaba phezulu iisimboli bahlawule ukuze baphumelele enkulu.
Nyx (NextGen) baye basungula le progressplay slot umdlalo. Nyx and NextGen sele ukuphuhlisa software yekhasino ezikumgangatho ophezulu. Baziwa ngokunika nabadlala ezahlukeneyo imidlalo online.
Lo mdlalo iza 243 iindlela ukuze uwine ifomati. Ukuba adlale kuzo zonke izixhobo ubhejo iqala 25p ukuya £ p250 basonta nganye. Wena kuyiswe efama kunye nemizobo isimbo ikhathuni. iisimboli ukuhlawula eziphakamileyo zonke ezinxulumene kwifama, ezifana, amaqanda, inkukhu, kunye yenkukhu coops chicken. Le lesishwankathelo umqhagi ixabiso icon liphezulu apho amabhaso kunye 2,000 zemali ukuze kokufika ezintlanu kwi payline. iisimboli ukuhlawula sityhafile amakhadi sidlala standard A, K, Q, J, 10, kwaye 9. Le ngqekembe Lucky nguye siwachithe. Wild yomdlalo i yalila. Oku kuvela kuphela ekwazi emithathu ephakathi kwaye ithatha indawo yonke into kuquka siwachithe.
Ezinye iimpawu zale progressplay Slots umdlalo ke Golden Free Imidlalo, Osebenzisa Free kunye Ezintlanu a Kind. Golden Free Imidlalo kuthetha agcwayele iya kuvela kuphela reel ezimbini, ezintathu ezine efanayo zasendle. Xa izisa kuzo zonke zontathu reel, Golden Free Imidlalo hlobo luza kwenziwa isebenze. Oku kubangelwa nkqu igqampe endle ezintathu kuzo zonke zontathu reel central. Wena zinikwa iinkozo mahlanu ijikelezisa ezilishumi free.
Ijika zasendle agcwayele ibe agcwayele kunye zasendle yaye ziyaphuma ekwazi kuphela emithathu ephakathi, Mbini, ezintathu ezine. Uya kunikwa kunye ijikelezisa ezilishumi ngaphezulu simahla ukuba phawu siyavela kuzo zonke reel emithathu ephakathi. Abahlanu a Uhlobo Combination hlobo luza kukuvuza izihlandlo ezihlanu wokuphindaphinda. Xa igqampe ezintlanu indibanisela uhlobo uphawu umqhagi lesishwankathelo, ungafumana ukuba uwine 400 amaxesha ukubheja kwakho okanye 10,000 iinkozo.
Low kwi hexa, egolide kahle elula ukudlala. Wild siwachithe esikhundleni umdla ngokwenene njengoko akuxhaphakanga kakhulu imidlalo online. ukuhlawula High iimpawu bonus ukwenza oku progressplay Slots umdlalo an exciting nezinomtsalane enye ukudlala.